शब्दकोश: December 2009
मैदानमा डढेलो लागेको हो कि,
बाफिएर फक्लेटा मैदान
पैँताला नै भुङ्ग्रो बनेको हो ?
चाहे जे भएर होस् -
कोइलाको अररो छाती फुकाउँदै
हिँड्नु छ यसपालि पनि यो पत्थरी लेकमा
लहरिएका जम्मैजम्मै हरियाली
निधारको गर्खे पाखोबाट
अभागको भर्याङमा खेल्दैखेल्दै चिप्लेटी
फेरि पनि बजारिएलान् उही सतहमा
खलाँतीसमान श्वासले पिच्कारी छोडेका
मगमगाउँदो पसिना र जगमगाउँदो भोक
धुरी नाघेर एउटा
माझको भन्ज्याङमा बास बसूँला भन्नेहरु हो !
के थाहा भन्ज्याङमा पनि एउटा धुरी नाघ्नु छ
अथवा रङ्ग्याउनु छ -
पहाडको खोँचमा सुक्खा रहेको खहरे सिउँदो
उत्सव मनाउने नाममा उछिट्टिएका
प्रेमिल आतिसबाजी झिल्काहरुको वियोगमा
मस्तले म रोएको छु,
परदेशीले यादको नौनी भरेर पठाएको ठेकी जस्तै
यो देशको भुइँ - ताछ्दै-चोइट्याउँदै
कोठा-कोठा आकाश टाल्दा
अचाक्ली म थाकेको छु
नयाँ एउटै आकाश
नयाँ एक मुठी ताराहरु
र सर्लक्क एक हेराइ,
एक पाइला नापेको यही एक यात्राका लागि,
नयाँ वर्ष !
अब तिम्रो एक धर्सो रेखा
लम्ब्याए हुन्छ यतै ।
Cafe का समस्त शुभेच्छुक, ब्लगर मित्र तथा आदरणीय-प्रेमिल स्वजनहरूमा यसै मेसोमा वर्ष २०१० को हार्दिक मङ्गलमय शुभ कामना अर्पण गर्दछु । नकोरिएका सपना कोरियून्, कोरिएका सपनाले गोरेटा भेटून् । अस्तु ।
Posted by Jotare Dhaiba at Wednesday, December 30, 2009 16 : Comments
Labels: कविता, समय-सन्दर्भ
Posted by Jotare Dhaiba at Tuesday, December 22, 20099: Comments
यी कीरा जस्ता स्याउँस्याउँती मान्छेहरु के पकाउन यसरी झुत्ती खेलेर लाम लागेका हँ ?
सडकमा धुवाँको मुस्लो र मनभरिको तुवाँलो फ्युजन भएर लामो धर्सो रेखी बन्छ - झ्याउलाग्दो !
एकजना दाइले भन्थे- सडकछेउ उभिएर हेर्नू सडकमा चिप्लेकीराजस्तै हस्याङफस्याङ गर्दै चिप्लिरहेका मोटर र मानिसहरुको लस्करलाई । कहाँ के पाउन गइरहेछ यत्रो लस्कर अचम्म लाग्छ । सबैको आ-आफ्नै ध्याउन्न आ-आफ्नै गुनगुन । आफैँलाई पनि त्यही भीडमा मिसाएर हेर्दा अनौठो बाछिटाले चुट्छ । अस्तित्वको महानतम भेंडीगोठ जस्तो लाग्छ सांसारिक डल्लो ।
धेरै कुराहरु लाग्न थालेको छ अचेल । त्यसो त नलागेका कुराहरु पनि धेरै छन् । तर कस्तो भने लागेका कुराहरुले ती नलागेका कुराहरुको जुलुसलाई छपक्कै ढाक्दा रहेछन् ।
सबै उत्तेजना र उम्लाइ ओर्लिएर रुखमा अन्तिम थोपा पानीमा बाँकी बचेको हिमआँधी झैँ भएको छ मन । यस कारण मनग्य छन् शिथिलताका ढुसीहरु ज्यानको हाँगाभरि ।
लाग्न थालेको छ - हरियालीको तह खुइलिँदो छ उमेरको जङ्गलबाट ।
लाग्न थालेको छ - उप्किएर प्लास्टरयुक्त तह त्यसमा हतारहरुको लेप थुप्रिँदो छ ।
लाग्न थालेको छ - प्रेमिल थर्मोमिटरको तापक्रम ओरालीमा सुरेली खेल्दो छ ।
हुस्सुदार धमिलो बिहानी । मन्द सडकको जाना-पहिचाना मोड । उफ्, नयाँपनको खोजीमा झिम्किने परेली थाकेर खुत्रुक्क बन्छन् । अफिसमा घुस्छु र लिफ्ट उक्लिन्छु, थाहा पाउँछु : तापक्रम १४-१५ डिग्रीमा मात्रै त झरेको छ । र पनि के साह्रो चिल्ने जाडो ! तैपनि बस्नु छ गुम्म कोठामा । समाचार शाखाको कामकाजी कक्ष तर आपैष सबै परिदृश्यबाट वन्चित छ कोही घाम लागेको पत्तो लाग्छ न केही कुराको चहलपहल यहाँबाट देखिन्छ । यो भन्दा चिस्यान झेल्ने असंख्य ज्यान देश-परदेशमा पनि छँदैछन् । अनलाइन भेटमा कुना-कन्दराका साथीहरु माइनसमा ओर्लिएको चिसो अनुभूति सुनाउँछन् । अनि लाग्छ यो ज्यानको ठाडोलाई जे गरे पनि नहुने ! चैते घाममा 'उफ् बज्जे यो गर्मी' र पुसमाघे जाडोमा 'थुइक्क ठिही' भनेर कुर्लिने त मौसमी रीत नै हो हाम्रो ।
अफिसमा काममा डुब्छु सहकर्मीहरुसँग हाँसखेल गर्दै रत्तिने प्रयास गर्छु । तर फेरि मन मान्दैन मेरो आफन्ती दुनियाँ त हुँदै होइन भने झैँ लाग्छ । आत्मीयताको अभावमा कोखा चर्किन्छ । विरानोपनको अनुभूतिमा रुमलिन्छ मन र भारीपन साथमै च्यापेर हरेक सात घन्टाको तापमान कुर्सीमा छाड्दै घरतिरको बाटो तताउँछु । कहिले त म आफैँ 'अफ बिट म्यान' हुँ कि भने झैँ झोँक पनि चल्छ । जीवनमा यस्तो अवस्था कुनै न कुनै बेला धेरैले अनुभव गर्दाहुन् ।
साथीहरु आफूदेखि टाढिँदै छन् कि साथीहरुदेखि आफू टाढिँदैछु कहिले त जिल्लिने रहेछ दिमाग पनि । जिन्दगीको हिसाब मिलाउने ध्याउन्नमा जिन्दगीमा रहेका धेरै कुराको हिसाबकिताब बिग्रिँदै जाने कुरा सामान्य हो कि भने जस्तो पनि लाग्छ । हाफ भोल्टेज आँखा फटाईफटाई अध्ययन हाक्नु जस्तै प्रतीत हुन्छ जीवन बाँच्नु । अर्थात् हात लाग्छ धमिलो दृष्टिअघि आकार र चिनारीबिनाका किरिङमिरिङ हरफहरु । र पनि पढ्नु त छ नै कनीकुथी भए पनि ।
Posted by Jotare Dhaiba at Sunday, December 20, 2009 8 : Comments
Labels: अनुभूति, आफ्नै कुरो
Posted by Jotare Dhaiba at Thursday, December 03, 2009 13 : Comments